Dheefta Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha ee Carewell - Carewell SEIU 503
Dhawr noolashaada inay si wanaagsan u socoto.
Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha (EAP) ee Carewell SEIU 503 wuxuu ku siinayaa kheyraad si lagaaga caawiyo noloshaada shakhsi ahaaneed, sida helitaanka adeegyo sharci oo qiiima dhimis leh iyo talobixinta ama wax uga sheegida maaliyadda qoyska.
Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha (EAP) ee Carewell SEIU 503 waxaa bixiyaa Uprise Health. La-taliyayaasha Uprise waxay kaa caawin karaan inaad si gaar ah u xalliso dhibaatooyinka saameynaya shaqadaada, qoyskaaga, iyo noolashaada guud ahaan. Adeegyada EAP waxay kuu yihiin bilaash waxaana kamid ah:
24-saac oo caawimaada dhibaatooyinka ah
Illaa iyo shan kulamo latalin oo qof loo imanayo 12kii biloodba mar
La-talinta caafimaadka dhimirka ee khadka tooska ah
Iyo waxyaaba kaloo badan
Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha ee Carewell SEIU 503 waa lacag la’aan — ma jirto wax biil bille ah oo aad bixin karto.
Marka aad xaq u yeelato, waxaad caymis ka heli doontaa Uprise Health.
Ma isticmaali kartid Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta si aad ugu bixiso kharash kasta oo la xidhiidha dheefaha Barnaamijka Caawimada Shaqaalaha.
Hubi u-qalmitaankaaga Dheefaha EAP
Si aad isla markiiba u ogaato u qalmitaankaaga, ka jawaab dhawr su’aalood oo ku saabsan xog uruurinteena u qalmitaankayaga.
Si aad ugu qalanto dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ee Carewell SEIU 503 waa inaad:
Shaqeysaa 40 saacadood ama saacado ka badan bishii saacadaha shaqada ee u qalmitaanka — sidoo kale loo yaqaan saacadaha cutubka gorgortanka — laba bilood oo isku xiga. Waxaa markaas jira hal bil oo sugitaan ah iyadoo saacadahaaga lagu soo wargelinayo Xafiiska Maamulka Dheefaha.
Si joogto ah u keen xaashida wakhtiga iyo/ama foojarada mushahar bixinta
Haku jiro faylka Xafiiska Maamulka Dheefaha magacaaga, jinsigaaga, Soshiyaal Sekiyuuritiga, taariikhda dhalashada iyo ciwaanka hadda jira. Riix halkan si aad u cusboonaysiiso macluumaadkaaga hadda jira.
Marka aan ka hadalno tirada “saacadaha shaqada” waxaad u baahan tahay inaad u qalanto dheefaha Carewell, taasi waxay la macno tahay saacadaha ay bixiso DHS iyo/ama PPL iyagoo matalaya macaamiishaada.
Luminta u qalmida
Haddii ay ku moodo laba bilood oo xidhiidh ah adiga oo aan shaqayn (ama haddii lasoo sheego saacadaha eber), muddada nimcada ee hal bil ka dib uma qalmi doontid dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ilaa aad haysato mooyaane. dib u helay xaq u yeelashadaada. Si aad dib ugu hesho u qalmitaankaaga dheefaha Carewell SEIU 503, waa inaad dhamaystirtaa tillaabooyinka kore.
Haddii aad qabtid su’aalo ku saabsan u-qalmitaankaaga fadlan wac Xafiiska Maamulka Dheefaha 1-844-507-7554, doorashada 3, doorashada 2
Dheefaha Ilkaha, Arragga + Maqal, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha waxaa laguugu hagaajin doonaa si otomaatik ah markaaad:
buuxiso Shuruudaha U-qalmitaanka ee kor lagu sharaxay;
ka cusboonaysiiso Xafiiska Maamulka Dheefaha iyo Gobolka magacaaga, jinsigaaga, Lambarkaaga Soshiyaal Sekuyuritiga iyociwaankaaga hadda..
Uma heli doontid kaar dheefaha Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha, laakiin waxaad boostada ku heli doontaa macluumaadka ku saabsan dheeftan oo kaaga imaanaya Xafiiska Maamulka Dheefaha. Ogsoonow maadaama shuruudaha u qalmitaanka ay isku mid u yihiin dheefaha Ilkaha, Aragga, Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ​waxaad ogaan doontaa inaad u qalanto EAP marka aad hesho kaadhkaaga Ilkaha iyo Aragga + Maqalka
Isticmaal adeegyadaada EAP
Si aad onlayn ugu isticmaasho:
Guji “Member Login” (Gelidda Xubinta”)
Isticmaal lambarka gelitaanka: OHWBT
Si aad telefoon ugu gasho
Haddii ay jiraan wax kharashyo ah oo la xidhiidha adeegyada aad ku isticmaasho Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha, laguuma siin doono magdhaw. Dib uga eeg guudmarka dheefaha wixii macluumaad dheeraad ah
‎‏Uma baahnid inaad dib u codsatid — ilaaiyo inta aanad tegin laba bilood oo isku xigta adigoon ka shaqayn saacadaha u qalma (ama ika warbixinta saacadaha eberka) waxaad ahaan doontaa inaad u qalanto dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha.
Haddii ay ku moodo laba bilood oo xidhiidh ah adiga oo aan shaqayn (ama haddii lasoo sheego saacadaha eber), muddada nimcada ee hal bil ka dib uma qalmi doontid dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ilaa aad haysato mooyaane. dib u helay xaq u yeelashadaada.
Haddii aad lumiso u qalmitaanka, waxaad iska qori kartaa caymiska sii wadida COBRA. Wixii macluumaad dheeraad ah kala xidhiidh Xafiiska Maamulka Dheefaha
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka baxdo dheefaha Ilkaha, Aragtida + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha waxaad buuxin kartaa foomka ka dhaafista.
Foomka Ka-dhaafitaanka Dheefaha(Dijital)
Dheefaha EAP oo Kooban (PDF)
Riix halkan si aad u aragto dhammaan agabyada EAP
Su’aalaha ku saabsan u qalmitaanka dheefaha Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha
Sababaha aad ula xiriiri karto Uprise Health:
Qabso ballan la-talin
Hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada sharciga ee laga heli karo Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha
Akhri su’aalaha caadiga ah ee ku saabsan dheefaha Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha ee Carewell Arag Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo wixii macluumaad dheeraad ah.
Sideen u isticmaalaa dheefaha barnaamijka kaalmada shaqaalaha, sida latalinta iyo qorsheynta maaliyadeed?
Waxaad ku heli kartaa adeegyada inaad booqato uprisehealth.com ama aad wacdo 1-800-395-1616. Koodhka gelitaankaagu waa: OHWBT.
Ma ku dari karaa xaaskayga ama xubnaha kale ee qoyska?
Maya. Dheefaaha Carewell SEIU 503 waxaa heli kara oo keliya kuwa bixiya daryeelka guriga iyo shaqaalaha taageerada gaarka ah ee u qalma iyo adeegayaasha daryeelka gaarka ah.